HIM | Health in Myanmar » 2012 » December
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, RFA, အကူအညီ
HIV/AIDS ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေကို ကုသပေးနေတဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့ မိုင်းလားရပ်ကွက်က HOPE Center ကို သွားရောက်ပြီး ဝေဒနာသည်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ အားပေး စကားပြောကြားခဲ့သလို ကချင်ပြည်နယ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ် နဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် မနေ့ ညနေပိုင်းက မြစ်ကြီးနားမြို့ ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေး အဖြေ (၁၀၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A3 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ရာသီလာတုံးနာရင်၊ ဆင်းတာများရင်၊ တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပြီး၊ တလမှာ ၂၁-၂၈ ရက်နေ့တိုင်းသောက်ရတဲ့ တားဆေးကပ်ကို ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် နာတတ်တာ သက်သာ လာပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကပ် အမျိုးအစား ပြောင်းချင်ပြောင်ရနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဆင်းတာထဲမှာ ဘယ်လိုအရာပါနေနေ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အခဲလိုဟာ ဆင်းခါနီးရင် ဗိုက်ရစ်နာနိုင်တယ်။ အနာ-အကိုက် ပျောက်ဆေး သောက်ရပါမယ်။ အစာနဲ့တွဲသောက်ပါ။ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပါ။
“မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသား အကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးသွားရတာ တအားကို ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းတွေ သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်သမား တွေကများတော့ မနက် ၁နာရီ ထိုးမှာ ဘုရားကျောင်း တက်ကြတယ်။ အဲဒါကတော့ မေ့မရတဲ့ အမှတ်တရပါပဲ။ အခုလိုမျိုး တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ဘုရားရှိခိုးခဲ့ရတာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ပါပဲ” လို့ ကဗျာဘွဲ့မှူးက ပြောပြပါတယ်။
အမေးအဖြေ (၁၀၃) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
STD အကြောင်းသိချင်လို့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မက အသက်၂၉ နှစ်ပါ။ အမျိုးသားက ၃၇ နှစ်ပါ။ ၁ လပိုင်း၊ ၉ ရက်၊ ၂ဝ၁၂ မှာ လက်ထပ်ပါတယ်။ ၁ လကြာ အတူနေပြီး အမျိုးသားက သူ့နေရပ်ကို ပြန် သွားပါတယ်။ အခုအမျိုးသားက ကျွန်မကို STD သွားစစ်ကြည့်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့မှာ STD ပိုးရှိလို့ ဆရာဝန်က ပိုးသတ်ဆေး (Dosyclycline) ၁၈ ရက်စာ သောက်ခိုင်းထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြားတွင် ပြည့်တန်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ တရား ဝင်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးပြီးစနစ် တကျဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ တရားဝင်လိုင် စင်များချထားပေးပါက ၄င်းတို့ကို အခွန်ကောက်ခံကာ တိုင်းပြည်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည့်တန်ဆာများကို တရားဝင် လိုင်စင်ချ ထားပေးနိုင်ရန် လွှတ်တော်၌ အဆိုပြု တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆက်ပြောသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, SW, အမျိုးသမီး
နိုင်ငံတကာတွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို မုဒိန်းမှု ကဲ့သို့သော ရာဇဝတ်မှုများ လျော့နည်းစေ ရန်အတွက် တရားဝင် လိုင်စင်များ ချပေးသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ တရားဝင် လိုင်စင် ချထားရန် စဉ်းစား ဆွေးနွေးသည့် အဆင့်တွင်ပင် မရောက်သေးပေ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သွေဖည်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်နေခြင်းဟူသော အကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူနေခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေး အဖြေ (၁၀၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A5 comments | Tags: ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သိချင်တာပါ။ သူကကိုယ်ဝန် (2) ပတ်နဲ့ သွေးဆင်းပြီး ပျက်ကျသွားပါတယ်။ သူရဲ့ချစ်သူနဲ့က အဝေးဆီမှာဆိုတော့ သတင်းပဲ ပို့ပေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကမယုံကြည်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်တွေတော့ ကောင်းလေးက ကောင်မလေးရဲ့ချက်ကိုကြည့်ပါရစေတဲ့။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာနဲ့ ချက်ကြည့်တာ ဆိုင်ပါသလား။ ဘယ်လိုလက္ခဏာများ ကျန်ရှိနေတတ်ပါလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရင်လို နေလို့ရသလား (၁)
ဒါပေမဲ့ “အရင်အတိုင်းသာ ဆက်လုပ်ပါ၊ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး” လို့ တိုက်တွန်းတာတော့ မဟုတ်ပါ။ အတွင်းသိ လင်မယား ဆိုရင် ထားတော့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင် ဘာမှမသိသူနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆက်ဆံမိရင် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရှိလို့ကတော့ မအေသာမက ကလေးကိုပါ ကူးတော့မှာပါ။
Do you want to makeafilm about female condoms?
Myanmar is one of the few countries in Asia where female condoms have foundahome. Film! Enter! [him] moderator ++++++++++++++++++ Submit your female condom film; enter to win prize money! Female condoms may be one of the most promising health technologies that people don’t know or hear much about. But together we can change […]
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar3 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Personal hygiene တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု နည်းလို့လားဆိုပြီး သန့်ရှင်းရေကို ပိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာမှာ သတိထားစရာတွေ ရှိတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေ က ဆေးကြောရည်တိုင်းက နေရာတိုင်းအတွက် မသုံးသင့်ပါ။ ပိုးရှိသမျှကို သေစေတာ မကောင်းပါ။ ကိုယ်ထဲ၊ ကိုယ်ပေါ်မှာ ပိုးဆိုတာတွေ အမြဲရှိနေတယ်။ သူ့ရောမှာ သူ့အမျိုးအစား ရှိနေတာက ကောင်းတယ်။ ရှိသင့်တာတွေကု ရှင်းလိုက်ရင် မျှခြေပျက်မယ်။
Yury silent on harm reduction
Yury came and went but the [him] moderator cannot findaword he said about harm reduction. Perhaps he wasn’t well briefed. The drug war has failed. [him] moderator ++++++++++++++++++ UN Anti-drugs Chief Visits Burma Irrawaddy December 3, 2012 The director of the UN’s Office on Drugs and Crime, Yury Fedotov, met with opposition leader […]